Musharraxiinta Somalia oo ku baaqay in degdeg loo xaliyo Xubnaha Somaliland u metelaya
Home WARARKA Musharraxiinta Somalia oo ku baaqay in degdeg loo xaliyo Xubnaha Somaliland u...
MUQDISHO —(Berberanews)-Midowga Musharraxiinta Mucaaridka Somalia ayaa ku baaqeen inay degdeg kulan u yeeshaan guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo odayaasha dhaqanka iyo wakiillada ugu sarreeya ee dawladda federaalka ku jira ee matalaya Somaliland, si ay iskula xulaan xubnaha guddiga doorashada Somaliland iyadoo aan madaxweynuhu faragelin.
Musharraxiinta mucaaradka ee madaxweynaha Somaliya ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin cawaaqibka sida xun ee Villa Soomaaliya u maamushay hannaanka dooarshada.
Warqad ay u qoreen beesha caalamka, ayey musharrixiintu ku sheegeen in baaqa dawladda ah ee in doorashada lagu qabto gobollo kooban ay si aan laga soo waaqsan karin u kala qoqobayso waddanka, waa sida ay hadalka u dhigeene.
Waxaa sidoo kale ay musharraxiintu ku sheegeen qoraalkaasi in ujeeddada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay tahay inuu fursadii codkooda seejiyo qaybo waaweyn oo ka mid ah waddanka.
Musharraxiintu waxay sheegeen inay ku baqayaan in si degdeg ah loo gaadho heshiis ilaalinaya kalsoonida lagu qabo nidaamka doorashada, waxayna sheegeen in loo baahan in la isla meel dhigo naqshad horseedaysa hab caddaalad ah oo sharci ah oo lagu soo xulo xubnaha guddiga doorashada.
Mucaaradku waxay sheegeen inay diyaariyeen liiska xubno ay tahay in laga saaro guddiga doorashada, sida ay sheegeen.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa todobaadkii hore sheegay in dawladdu go’aansatay inay qabato doorasho si looga baaqsado ayuu yiri faaruq. Sidoo kale Madaxweynaha Maamul Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in dhexdhaxaadin uu waday guuldarraysatay.
Previous articleSheekada ku saabsan “Wadaadka” dumarka qaawan ku dhex jiray
Next articleSomaliland oo Madaxtooyo ka dhisaysa Laascaanood